China Nkịtị Nkịtị Emere osise ighikota-anya na Lid mkpuchi Jam Honey ite 1000ml 100cl 72cl Glass ite factory na-emepụta | Luhai
Nkịtị Nkịtị E Mere Ihe Ntanye Ntughari-na Lug Lid Jam Honey ite 1000ml 100cl 72cl Glass ite
Condiments stylesdị akpa: SWIVEL
Nkwakọ ngwaahịa:> 10
Nhazi ọrụ: Ọrụ dị iche iche
Mentkwụ termsgwọ okwu: TT, LC, Paypal na Western Union
Nkwakọ ngwaahịa nkọwa ： Standard Export pallet mbukota ma ọ bụ Carton mbukota
Ibu (iberibe) 1 - 6000 > 6000
1.Do na-enye ihe nlele n'efu?
Ee, anyị na-enye nnwale n'efu. Naanị ị ga-akwụ ụgwọ ụgwọ akwụkwọ ozi.
2.Gịnị ka ị ga - azụta n’aka anyị?
Kinddị iko karama & ite niile, dịka karama iko, karama biya. Wotkey Bottle.Vodka Bottle.Rom Bottle, Bottle Tequila.
3.Can ị na-eme OEM na ODM?
Ee, n'ezie. Nke a bụ otu n'ime isi uru anyị.
4.Olee otú anyị nwere ike ekwe nkwa ịdị mma?
Anyị nwere usoro nyocha usoro isii maka ngwaahịa. Nke mbụ bụ nyocha ọkụ ọkụ. Nke abụọ bụ igwe nyocha igwefoto. Nke atọ bụ nyocha igwe nyocha. Echiche bụ ndị ọrụ dị mma nyocha nyocha niile oghere na ahịrị. Nke ise bụ nyocha ụlọ nyocha. Nke isii bụ nlele tupu ịbanye n'ime ụlọ nkwakọba ihe. Nlekọta usoro 6 ndị a nwere ike hụ na ogo ahụ.
5.Ogologo oge ole ka oge nnyefe gị?
N'ikwu okwu n'ozuzu, ihe dị ka ụbọchị 30 mgbe ịkwụ ụgwọ.
6.Gịnị mere ị ga - eji zụta n'aka anyị abụghị n'aka ndị na - eweta ngwaahịa ndị ọzọ?
Nnukwu ikike imepụta na-ekwenye na nnyefe oge.
Jighi àgwà akara ana achi achi gị mma.
Ezi uche Ahịa ana achi achi mmeri-mmeri ọnụ Top n'ọkwá na isi ụgbọ mmiri akara hụ nnyefe na service.Best ọrụ na mgbe-sales ọrụ hụ na azụmahịa ogologo oge.
Anyị "na-anwa ịdị mma, ụlọ ọrụ maka ndị ahịa mkpa", na-atụ anya ịbụ ndị otu nkwado kachasị mma, ndị na-eweta ngwaahịa, na-achọpụta oke uru yana mgbasa ozi na-aga n'ihu maka China Gold Supplier for China 50ml 100ml 250ml 500ML, 750ML, 1000ML Maple Glass Bottle for Wine / Honey na ịghasa Plastic Ma Metal lids, Anyị ngwongwo na-n'ọtụtụ ebe ghọtara na tụkwasịrị obi site na ndị ọrụ na ike afọ ojuju nọgidere guzosie ike akụ na ụba na-elekọta mmadụ mkpa.
China Gold Supplier maka China Glass Honey ite na karama na Wine karama na mkpuchi price, Na nke kacha mma na nkà na ụzụ na-akwado, anyị na-ahaziri anyị website maka kasị mma ọrụ ahụmahụ na-n'uche gị ala nke ịzụ ahịa. anyị na-ahụ na nke kachasị mma rutere gị n'ọnụ ụzọ gị, n'oge dịkarịsịrị obere yana site na enyemaka nke ndị ọrụ mmekọrịta anyị na ha dịka DHL na UPS. Anyị na-ekwe nkwa ịdị mma, na-ebi ndụ site na ụkpụrụ nke ịkwere naanị ihe anyị ga-eweta.
Nke gara aga: Hot Sale Small Square 50ml 100ml Hot Chili Sauce Jam Mmanụ aottụ Karama Glass ite maka Honey Jam
Osote: 320ml igwe anaghị agba nchara Plus Glass Olive Oil Dispenser Mmanya na Soy Sauce Bottle maka Kitchen
Glass Honey ite na Metal Cap
Hegzagon Glass Honey ite
Now Glass Honey ite
Square Glass Honey ite
Hot Sale Obere Square 50ml 100ml Hot Chili Sauc ...
8oz 10oz ịghasa top mkpuchi iko mmanụ a honeyụ ite iko ja ...
Food ọkwa hexagonal mmanụ a glassụ iko ite jam puddi ...
Azụta 1oz 10oz 30ml 100ml 120ml 150ml 240ml 3 ...
730ml mmanụ a honeyụ jam nri chili ihendori pickles square ...
25ml- 500ml iko ite na metal mkpuchi iko cont ...